२०७८ असोज ४ सोमबार
काठमाडौँमा ‘मिसेस् नेपाल वर्ल्ड’ आयोजना हुँदै
यी हुन् मेयरलाई मुक्का हान्ने बुटवलका गणेश पंगेनी
गाई काटेर भाग लगाउँदै गरेको अवस्थामा एउटै गाउँका १० जना पक्राउ
प्रदेश १ मा आज २१५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण, ३ जनाको मृत्यु
२ महिनापछि धरौटीमा रिहा भए भारतीय व्यापारी राज कुन्द्रा
५५ लाख ८८ हजारले लगाए खोपको पूर्ण मात्रा, कुन प्रदेशमा कति ?
नयाँ सङ्क्रमित भन्दा निको हुनेको सङ्ख्या तीन गुणा बढी
सिग्देलको ‘मनको कैदी’ पुस्तक प्रकाशित - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सिग्देलको ‘मनको कैदी’ पुस्तक प्रकाशित
शनिवार, साउन २३ २०७८
झापाका पत्रकार तीर्थ सिग्देलद्धारा लिखित ‘मनको कैदी’ कथासंग्रह प्रकाशित भएको छ ।
०७६ सालमा प्रकाशित मनोनेट कथासंग्रह पछि त्यही बिधामा अर्को पाइला चालेका सिग्देलको यही साउनमा प्रकाशन भएको पछिल्लो पुस्तक ‘मनको कैदी’ पाँचौ कृति हो । अर्थात्, दोस्रो कथासंग्रह ।
कथा, निबन्ध र नियात्रा लगायतका साहित्यिक बिधामा उत्तिकै कलम चलाउन सक्षम तीर्थ सिग्देल युवा पुस्ताको लेखन साहित्यमा उदाउँदो नाम हो । उनका किताबमा मान्छेका मनका बारेमा धेरैजसो चर्चा गरेको पाइन्छ ।
लेखक: तीर्थ सिग्देल
त्यसको कारणबारे स्वयम् लेखक सिग्देल भन्छन्, ‘खासमा मान्छे मनद्धारा संचालित हुन्छ । मनले नै सबै ज्ञानेन्द्रियहरु परिचालित भएका हुन्छन् ।
जसले मानिसहरुका इच्छा, कामना, अभिलाषा, रुचि, स्वभाव र प्रकृतिलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ । अझ भनौं, उनीहरुका उनीहरुको अनुभव, इच्छा, क्रोध, विचार, संकल्प विकल्पलाई नियन्त्रित तथा परिभाषित गर्ने अन्तःकरणको अंश वा वृत्ति, नाक, कान, आँखा, स्पर्श, स्वाद आदिले प्रभावित पार्ने इन्द्रीय अन्तःकरण, चित्त, दिल वा हृदयको आवाज हो । जहाँ मानिसहरु कैदीसरह जीवन बिताउन बाध्य छन् ।’
मूलतः मनको कैदी त्यही मनको परिधिभित्र लेखिएको कथासंग्रह हो भन्दा हुन्छ, जहाँ संग्रहित १३ बटा कथाहरु सबै नै मनोबैज्ञानिक शैलीका छन् । मान्छेका मनमा उर्लिएका भावना र विचारहरुको मेल नै यो कथा संग्रहको सार हो । मान्छे नबुजी कथा लेख्न सकिन्न र मान्छे बुझ्न मान्छेको मनमा पस्न सक्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने लेखकले मनको कैदी पुस्तकमा अनौठो प्रयोग गरेका छन् ।
प्रकाशकः मिडिया रिसर्च सेन्टर
त्यहाँ समेटिएको ‘उर्लंदो समुद्र र भावना’ शीर्षकको कथाको तीन भाग छ, जसलाई नेपाली साहित्यमा अलग्गै प्रयोगको रुपमा लिन सकिन्छ ।
मान्छेका मनभित्र गुम्सेर रहेका अव्यक्त भावहरु बुझ्ने र बुजाउने प्रयोगात्मक शैली यसमा अपनाइएको छ । समग्रमा मान्छेले मनलाई कसरी लिएको हुन्छ र त्यही मनले चाह्यो भने के सम्म गर्न सक्छ भन्ने यसमा प्रष्ट पारिएको छ । सारा संसारलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र माध्यम मन हो । मनले चाह्यो भने जेपनि हुन्छ ।
एकै क्षणमा यहाँ आगो बल्छ र केही क्षणमै युद्ध हुन्छ । सिंगो मानवलाई चलाउने मान्छेको मन हो, जसलाई ठिक ढंगले बुझ्न र बुझाउन सकेमा क्षति कम हुन्छ ।
उनको यसअघि प्रकाशित मनोनेट कथासंग्रह त्यही मनको सिद्धान्तमा आधारित थियो । त्यो किताबले धेरैले मान्छेको मन जित्यो । त्यसपछिको यो किताबमा पनि मनोनेट शैली नै झल्किन्छ । तर, अर्को रुपमा ।
तीर्थ सिग्देलको कृति : मनको कैदी
यो किताब मनोबैज्ञानिक शैलीको छ । आज विश्वमा बिभिन्न बादहरु मध्ये जस्तैः फ्रायडबादको चर्चा बढी गरिन्छ । नेपालमा बीपीले यसको प्रयोग गरे । पछि अरु ख्यातिप्राप्त लेखकहरुको किताबमा यसको प्रयोग भएको छ । कतिपयले यौन मनोबैज्ञाबिज्ञान वा मनोबैज्ञानिक लेखन शैली भनेका छन् । तर, जसले जे भनेपनि यसरी प्रयोगात्मक रुपमा लेखिएका किताबमा मनोबिज्ञान झल्किन्छ । त्यो प्रयोग यसमा पनि छ ।
‘खासमा भन्ने हो भने एउटा लेखकले मान्छेको मनभित्र पसेर लेख्न सक्नुपर्छ । म त्यही शैली अपनाउँछु, जहाँ मान्छेहरुको कथा, व्यथा झल्किन्छ’, लेखक भन्छन् ।
मान्छेको मनभित्र गुम्सिएर रहेका कतिपय भावनाहरुको प्रकटीकरण उनकोे लेखाइको मुल पक्ष हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, साउन २३ २०७८ १९:०५:१४
सङ्खुवासभा हत्याकाण्ड : प्रहरीले भेट्टायो हराइरहेको फोन, लोकबहादुरका भाइ पनि पक्राउ
‘एकादेशको कथा’को साथमा आए हिमाल सागर (भिडिओ )
चर्चामा प्रियंका जोडिको तस्विर
पहेँलो लुगामा खुलेको नोराको जवानी !
मोरङमा आफ्नै छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा नेपाली सेनाका पूर्वजम्दार पक्राउ
बिहे भोजमा मासु नदिएको भन्दै झडप, १ को मृत्यु अन्य घाइते
१८ वर्षमै बिवाह गरेकी टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको डिभोर्स
संस्कारी ‘गोपी बहु’को बोल्ड लुक्स !
मिर्गौला पीडितलाई सहयोग भन्दै पोखरामा चन्दा उठाउने झापाका तीन पक्राउ
आफ्नै आमाबुबा विरूद्ध विजयले अदालतमा हाले मुद्दा
हावामा मिसिएको आफ्नोपन
कहिल्यै त लामो बस्दाउनी हो.. देऊ-बा !
म भन्दा ठुलो लोभी
अब म आउँदिन
कविता : उनको सम्झनामा
सेती अस्पतालमा उपचाररत दुई कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
अनुसन्धानकर्ताको टोली पुनः घटनास्थल फर्कियो
बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा ट्रकका चालक र सहचालक पक्राउ
अफगानिस्तानका अपदस्त उपराष्ट्रपतिको घरबाट ७७ करोड नगद र १८ सुनको इँटा बरामद
नेपालमा भेटियो निपा भाइरस फैलाउने चमेरो